Caadooyinka Swiss: Wax badan oo ka badan shukulaatada iyo saacadaha | Wararka Safarka
Luis Martinez | 25/12/2021 13:13 | dhaqanka, Switzerland
ka Kastamka Swiss Waxay ka jawaabaan, inta badan, Bartamaha Yurub ama caadooyinka asaliga ah ee saameeya dhinacyo badan oo nolosha ah ee dalka. Meelahan waxay u dhexeeyaan adhijirnimada ilaa ciidaha iyada oo loo marayo gastronomy, dabeecadaha dabeecadda ama muusikada.
In kasta oo uu yar yahay, waddanka Switzerland waxa uu leeyahay tiro badan oo kastam ah oo ku xardhan qaabka dadka deggan, oo laga yaabo, inay ku yaabi doonaan. Qaar badan ayaa ku badan Yurub inteeda kale sida u dabaal degaya kirismaskaHalka qaar kalena ay yihiin kuwo asal ahaan ka soo jeeda waayihii hore ee ummadda. Laakin, annagoon xamaasad dheeraad ah lahayn, waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah caadooyinka ugu caansan Switzerland.
1 Caadooyinka Swiss: laga bilaabo luqadaha ilaa gastronomy
1.1 Luqadaha Swiss
1.2 Muusiga gaarka ah ee caadooyinka Switzerland
1.3 Damaashaadka, lagama maarmaanka u ah kastamka Switzerland
1.4 Farshaxanka Swiss
Caadooyinka Swiss: laga bilaabo luqadaha ilaa gastronomy
Waxaan bilaabi doonaa socdaalkayaga kastamka Switzerland annagoo kaala hadlayna luqadahooda. Kadibna waxaan sii wadi doonaa inaan eegno dhinacyada kale sida muusikada ama xafladaha, ugu dambeyntii, waxaan ku dhameyn doonaa diiradda saarista gastronomy-ga macaan ee waddanka Swiss.
Meelaha luqadaha ee Switzerland
Juquraafi ahaan meesha ay ku taal awgeed, Switzerland waa meesha dhaqamada kala duwan ee Yurub ay isaga gudbaan. Sababtan awgeed, waxay leedahay saddex luqadood oo rasmi ah iyo mid kale oo qayb ahaan la aqoonsan yahay oo ka jawaabaya asalka dadka ka kooban.
Luqada ugu badan ayaa la yiraahdaa Jarmal Swiss, oo ku hadla ku dhawaad ​​boqolkiiba lixdan iyo afar dadka deggan. Aad bay muhiim ugu tahay gobollada waqooyi, bari iyo bartamaha qaranka. Intaa waxaa dheer, inta badan shabakadaha raadiyaha iyo telefishinka ayaa isticmaala.
Waxaa ku xiga tiro ku hadlaayo by Frances, oo ay isticmaalaan ku dhawaad ​​boqolkiiba soddon iyo sagaal dadweynaha iyo aqlabiyadda galbeedka dalka. Intaa waxaa dheer, in aagga Romandie lahjadaha Franco-Provencal waa la ilaaliyaa, sida vaudois ama neuchatelois.
Luuqadda saddexaad ee Switzerland waa Italiano, oo ay isticmaalaan boqolkiiba shan iyo toban dadka deggan, taas oo, macquul ahaan, u badan tahay koonfurta dalka. Waxa kale oo jira lahjad Lombard ah: the tesinese.
Xusid gaar ah waa inaan kaa dhigaynaa mid gaar ah romansh. Sidoo kale waa luqad rasmi ah, inkastoo dukumentiyada dowladda aan loo baahnayn in la isticmaalo. Waxaa looga hadlaa gobolka Graubünden tirada guud ee dadka isticmaalana waxay ka dhigan tahay 0,6% dadweynaha. Waxaad xiisayn doontaa inaad ogaato inay tahay luqad Romanesque ah oo la xidhiidha Ladino iyo Friulan oo lagaga hadlo waqooyiga Talyaaniga, inkasta oo ay u kobcisay si ka badan kuwan.
Muusiga gaarka ah ee caadooyinka Switzerland
Fanaaniin kala duwan oo qaadaya geesaha alpine
Ma ahan inaan kuu sheegno in Switzerland aad ku maqashid muusig la mid ah kan Isbaanishka, Francia ama Maraykanka. Laakin, sida quruumahan oo kale, waxa ay sidoo kale leedahay muusik dhaqameedkeeda oo waxaad ka heli doontaa mid aad u xiiso badan.
Qalabkii ugu wacnaa ee dalka waa wacitaanka gees alpine. Waxa laga sameeyey alwaax oo dhererkiisu u dhexeeyaa 1,5 iyo 3.60 mitir, waa mid toosan oo leh dhammaad ololaya. Waxay soo saartaa dhawaaqyo is-waafaqsan oo la mid ah kuwa buunka, laakiin asalkiisu aad buu qadiimi u yahay.
Ugu yaraan, waxay dib u soo noqotay qarnigii XNUMXaad, markii loo isticmaali jiray in loogu yeero lo'da aagga Alpine iyo sidoo kale in la xiriiro beeralayda laftooda. Laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu tarjumo heesaha alpine ee dhaqameed, si cajiib leh, waxay la mid tahay qalabyada kale ee Pyrenees, Carpathians iyo xitaa buuraha Andes ee Koonfurta Ameerika.
Dhanka kale, Swiss sidoo kale waxay leeyihiin hees dhaqameed. Waa tii caanka ahayd tyrolean. Waxaa lagu gartaa, sida aad marar badan aragteen, isbeddel degdeg ah oo ku yimaadda codka, oo u dhexeeya hooseeya ilaa sare oo ah qaabka falsetto. Si kastaba ha ahaatee, maaha mid u gaar ah Switzerland. Sidoo kale waxay ka tirsan tahay dhaqanka Alpine guud ahaan, waana sababta loogu fasiray Austria, waqooyiga Talyaaniga iyo xitaa Jarmalka. Laakin, si cajiib leh, waxaa jira heeso la mid ah ilaa fog sida Iskandaneefiya ama Bartamaha Afrika.
Damaashaadka, lagama maarmaanka u ah kastamka Switzerland
Dalka Switzerland ayaa u dabaal dagaya Fasax qaran 1291-da Ogosto. Waxa ay xuseysaa waxa loogu yeero Axdiga Federaalka ee XNUMX, halkaas oo seddexda gobol ee hadda jira ay ku heshiiyeen in la abuuro shuruudaha lagama maarmaanka u ah mideynta dal ahaan. Guud ahaan dhulkeeda, munaasabadaha ciida ayaa lagu qabtaa. Laakin xiisaha dabaal-degga ayaa ah in loo oggol yahay in la furo rashka shaqsi kasta.
Dabaaldeg kale oo aad muhiim u ah Switzerland waa inuu la xiriiraa transhumance ee lo'da. Inkastoo, runtii, waa inaan kuu sheegno laba fasax. Sababtoo ah waxay dhacaan xagaaga hore iyo deyrta. Taariikhda koowaad, adhijirradu waxay u qaadaan lo'dooda buuraha Alpine si ay si xor ah u daaqaan, halka tan labaadna, ay ku celiyaan xeryaha. Laakin, labada xaaladoodba, waxaa lagu qurxiyaa ubaxyo iyo gacallo, waxaana lagu soo bandhigaa safaf.
Dhanka kale, caadooyinka Switzerland waxaa sidoo kale jira xaflado kale oo dabeecadda maxalliga ah, laakiin muhiimad weyn u leh dalka oo dhan. Tusaale ahaan, waa kiiska madaxa goosha ee Sursse, kuwaas oo aan si wanaagsan kaaga hadli doonin; ee Basel carnival ama ka mid ah iidda winegrowers ee Vevey, kaas oo ay UNESCO ku dartay hiddaha dhaqanka ee aan la taaban karin.
Iyada oo ay weheliso mindiyaha jeebka caanka ah, waddanka Switzerland wuxuu leeyahay warshad farshaxan oo farshaxan oo xiiso leh. Waxay caan ku tahay St. Gall, taas oo soo bilaabatay qarnigii toddoba iyo tobnaad oo si gaar ah ugu taagan shaqada suufka iyo dharka. Isla sidaas oo kale ayaa la odhan karaa Neuenburg bobbin xargaha iyo warshadaha xariirta ee Zurich, oo ku beegan ilaa XIV.
Kala duwan ayaa ah farshaxan-dhaqameedka alwaax ee Brienz, natiijadii ka soo baxday waa Matxafka Swiss of Carvings iyo Sculptures, iyo sidoo kale dhoobada beeralayda ee Berne, kaas oo soo bilowday qarnigii XNUMX-aad oo aqoonsi caalami ah haysta.
Laakiin, haddii farsamada Swiss ay u taagan tahay wax, waa sababtoo ah saacadahooda, kuwaas oo noqday mid ka mid ah warshadaha qaranka ee dalka. Si kastaba ha ahaatee, ma aha caadada Swiss ee asaliga ah. Waxaa loo qaaday magaalada Geneva by Huguenots kuwaas oo gabaad ka dhigtay intii lagu jiray qarnigii XNUMXaad.
Farsamadan ayaa markiiba ku fiday meelo kale sida Neuenburg, halkaas oo la yaab leh sida saacadaha jeebka ee Taschenuhren ama saacadaha pendulum ayaa la abuuray. Tan iyo markaas, Swiss-ku waxay isu dhigeen inay yihiin soosaarayaasha qaybahan sare, in kasta oo ay sidoo kale gaadheen heerar muhiim ah sida biyuhu ugu horreeyaan ama saacaddii ugu horreysay ee quartz. Tani waa sumcadda Swiss-ka ay ku leeyihiin saacad-sameeyaha oo la soo jeediyay in farshaxankooda lagu daro hidaha aan la taaban karin ee aadanaha.
Si kastaba ha ahaatee, caado kale oo ka mid ah waddanka Swiss ee ku dhashay isla wakhtigaas saacad-sameeyaha ayaa ah mid aad loo yaqaan. Waxaan ka hadalnaa samaynta automatons iyo sanduuqyada muusikada. Horaantii 1770kii walaalaha Jaquet-tacban Waxay soo bandhigeen saddex android oo Yurub oo dhan ka yaabisay.
Dhinaceeda, sanduuqa muusiga ayaa sabab u ah Antoine favre, kaas oo u soo bandhigay 1796 Ururka Fanka ee Geneva. Laakiin wax-soo-saarkeedu markiiba ku fiday gobollo ay ka mid yihiin Sainte-Croix o Geneva.
Saxan ka mid ah raclette
Ugu dambayntii, waxaan soo gabagabeyn doonaa socdaalkayaga kastamka Switzerland annagoo kaala hadli doona cilmiga gastronomy. Dhanka iyada, wax la mid ah waxa aan ku sharaxnay saacadaha ayaa dhacaya. Waxay caan ku tahay adduunka oo dhan shukulaatada ee dalka Switzerland.
Si kastaba ha ahaatee, sida aad ogtahay, badeecadani waxay ka timid Ameerika qarnigii XNUMXaad. Si kastaba ha noqotee, shukulaatada Swiss ayaa si dhakhso ah u heshay caan caalami ah iyada oo ay ugu wacan tahay cuntooyinka sida isku dhafka caanaha Alpine, sababtoo ah Daanyeel peter, ama shukulaatada barafku, abuuray Rodolphe Lindt.
Alaabada kale ee muhiimka ah ee Swiss waa farmaajo. Noocyadiisa aad bay u badan yihiin oo waxaad u safri kartaa dalka adoo tijaabinaya (waxaa jira ilaa afar boqol iyo konton). Inta badan eedda ayaa sidoo kale waxaa u sabab ah caanaha quruxda badan ee ka yimid lo'da Alpine. Waxaa ka mid ah farmaajo ugu caansan qaranka Gruyère, udgoonka Appenzeller ama Sbrinz, nooca qabow.
Laga soo bilaabo badeecadan waxay ka timaaddaa mid ka mid ah suxuunta caadiga ah ee Switzerland: ah fondue, oo aan wax kale ka ahayn farmaajo dhalaalay oo la cuno iyada oo la dhuuqo xabbado rooti ah oo fargeeto gaar ah lagu hayo. Waxa lagu dhex adeegaa dheriga dhoobada ah ee loo yaqaan caquelón. Nooc ka mid ah kala duwanaanshiyaha ayaa ah cunsuriyad, kaas oo ka kooban, marka lagu daro farmaajo dhalaalay, baradhada aan la karinin, basasha, qajaarka, khal iyo khardal.
Qeyb ahaan, älplermagronen Waa saxan ay ku jiraan baradhada gratin, macaroni, basasha, kareem iyo farmaajo waxaana lagu daraa qurxin tufaax ah oo la shaandheeyay. Iyo roosti Waa nooc ka mid ah omelette baradho ah, laakiin aan lahayn ukun, tan iyo markii ay ku xidhan tahay istaarijka tuberka laftiisa.
Sida quraacda Swiss, laga yaabee in ugu caansan waa waxa loogu yeero birchermüesli, kaas oo ka kooban liin, caano la shiiday, miro duuban, tufaax daadi iyo yicib ama hazelnuts.
Qeyb ahaan, zürcher geschnetzelte Waa hilib lo'aad oo lagu daray suugo kareem, boqoshaada iyo rösti. Iyo biir Waa nooca Swiss ee sausages Jarmal. Marka laga hadlayo cabitaannada, Casiirka tufaaxa Aad bay caan u tahay iyo sigaar iyo khamri.
Gabagabadii, waxaan ku tusnay qaar ka mid ah Kastamka Swiss. Laakiin waxaa jira kuwo kale oo aad u xiiso badan sida kuwa la xiriira iyaga dharka gobolka; wicitaanada fasax goosashada, maanta waa la dhimay fasax ah kaas oo sausages la cuno iyo khamriga la cabbo, ama ciyaaraha gaarka ah ee qaranka ee dalka: hornussen, kaas oo ka kooban, si ballaaran u hadla, tuurista saxan inta ugu badan ee suurtogalka ah. Ogaanshaha dhammaan caadooyinkan dalka Switzerland, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad booqato.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Switzerland » Kastamka Swiss
Waxa lagu arko Soria iyo nawaaxigeeda
Cuntooyinka Jarmalka ee caadiga ah